Maskaxda N95, Maaskaro Wajiga, Maska qalliinka, Maska Caafimaadka - Nuomigao
Maskaxda lagu tuuri karo Maska
Mashiinka Xakameynta ee Maabusha ah (KN95)
Mashiinka Maskaxda ee Mawduuca ah (FFP2)
Maska carruurta lagu tuuri karo Maska
Maaskaro ilaalin kara
Fujian Nuomigao Medical Technology Co., Ltd waa soo saare xirfadle ah oo daryeelka caafimaadka shaqsiyadeed iyo maaskaro caafimaad, kuna faantaa aqoon isweydaarsiga casriga ah, qalabka wax soo saarka horumarsan oo ay ku jiraan mashiinka maaskaro mashiinka lagu rito, Mashiinka Maska Mashiinka Mashiinka Maska.
Marka loo eego baahidaada shaqsiyeed, waxaan ku siin doonnaa adeegyo latalin xirfad leh
Waxaan ku siinaynaa oo keliya alaabooyinka, laakiin sidoo kale xalka tayo sare leh iyo adeegyada wax soo saarka
Hel shahaadada diiwaangelinta aaladda caafimaadka, shahaadada CE iyo shahaadada FDA
Waxay sameysay nidaam qaab dhismeed dhameystiran iyo shabakad adeegga iibka ballaaran leh, waxayna sameysay xiriir iskaashi wanaagsan oo lala yeesho shirkado badan
Waxyaabaha gogo '(awooda bil kasta)
Ha argagixin! Awooda maaskarada ayaa soo kabaneysa
Iyada oo horumarka joogtada ah ee xaaladda cudurka faafa, isticmaalka maaskarada ayaa si aad ah kor ugu kacay. Maaskaro kasta oo dheeri ah oo la soo saaro waa ilaalin nabdoon oo dadka iyo shaqaalaha caafimaadka ah. Waaxaha awooda u leh iyo shirkadaha wax soo saarka la xiriira ayaa ku tartamaya waqti. Marka loo eego xogtii ugu dambaysay, ilaa 7dii Febraayo, heerka dib-u-soo-nooleynta warshadaha maaskaro ee waddanka oo dhan ayaa gaadhay 73%.
Maxaan ka ogaan karnaa waji xidhka sida loo xidho maaskaro? (samee oo ha yeelin)
midab ka soo bixida: waa inuu joogaa meesha had iyo jeer: waligaa ha u jiidin marka aad ka tageyso qolka, ama marka aad lahadleyso bukaanka ama aad rabto inaad si fudud u neefsato waa maxay masaska saxda ah? iyadoo loo eegayo nooca nidaamka: heerka difaaca (hoose, dhexdhexaad ama sare) raaxo iyo habboon: sanka oo sanka dabacsan raaxo tha ...
Maaskaroolka Shiinaha ayaa ku buuxisa dunida: Mashiinka wax soo saarka maaskaro ayaa kala bar dhoofinta alaabada dunida
Maaddaama baahida adduunka ee maaskaro ay sii kordhayso, Shiinaha ayaa hadda laga yaabaa inuu si tartiib tartiib ah uga baxo. Tan Qunhong, maamulaha guud ee mashiinka mashiinka mashiinka lagu keydiyo ee Bartamaha Shiinaha, ayaa sheegtay inay soo gabagabeysey iibsiga dowladda Shiinaha ayna hadda dib u bilaabayso dhoofinta. Initiiti ...
Fujian Nuomigao Technology Technology Co., Ltd.
Telefoon: 0086 18616356189